MOOD Keyboard, mandefasa hafatra vita amin'ny soratra | Vaovao IPhone
Kitendry MOOD ho an'ny iPhone, mandefasa hafatra an-tsoratra
Efa misy kitendry ankolafy vitsivitsy ho an'ny iPhone, ka ny manavaka ny tenanao amin'ny sisa dia sarotra kokoa. Kitendry MOOD mahatratra izany amin'ny alàlan'ny fanolorana rafitra iray an'ny fanamboarana hafatra Tianay halefa amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra (WhatsApp, Mail, Notes, Telegram, sns.).
Raha te hahalala kely kokoa ny fomba fiasan'ny MOOD Keyboard, ny zavatra voalohany tokony hataontsika vantany vao misintona an'ity kitendry ity isika dia ny mampandeha azy amin'ny fitaovana iOS. Mba hanaovana izany dia efa fantatrao fa tsy maintsy mankany amin'ny menio Settings> General> Keyboard> Kitendry> Manampia kitendry vaovao. Rehefa ao amin'io faritra io ianao dia misafidy ny MOOD Keyboard ary omenao izany alalana mifandraika izany. Aza manahy momba ny olan'ny tsiambaratelo satria avy amin'ny Notegraphy (developer app) dia manome toky izy ireo fa ity keyboard dia tsy mamaky na mitahiry ny atiny soratantsika amin'ny iPhone.
Manamboatra hafatra an-tsoratra amin'ny klavier MOOD
Raha vantany vao navadika ho an'ny iPhone na iPad ny Keyboard MOOD dia mila mandeha any amin'ny iray amin'ireo rindranasa voalaza etsy aloha izahay dia ho hitanao izany rehefa manoratra isika, ny kitendry dia manome endrika amboara maromaro miaraka amin'ity lahatsoratra ity ihany, amin'ny fotoana rehetra.
Etsy ambany misy kely anao fampisehoana video ny fomba fiasan'ny MOOD Keyboard ka mazava kokoa ny tolotra omeny antsika:
Amin'ny fitambarany dia manana isika mihoatra ny 45 sivana isan-karazany Mba handefasana endrika mety amin'ny fotoana rehetra, na dia noho ny fanavaozana farany azy aza dia efa manana modely izay miantso ny Krismasy na koa ny Star Wars saga amin'ny fotoanan'ny premiere ny sarimihetsika farany ataon'izy ireo.
Ankehitriny satria efa akaiky dia akaiky ny vanim-potoanan'ny fiarahabana, dia azo antoka fa te-hisintona ny MOOD Keyboard ianao mandefasa hafatra manokana sy manokana amin'ny fianakavianao sy ny namanao.
Mba hamaranana dia ampahatsiahivo fotsiny anao fa mamela anao hampiasa kitendry marobe maromaro i iOS, ka raha tsy te hampiasa an'io isika dia afaka miverina amin'ny rafitra voalohany hatrany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny te
Ny tsara indrindra, Keyboard MOOD maimaim-poana tanteraka izany noho izany dia mila tsindrio fotsiny ilay rohy eto ambany ianao mba handefasana ity kitendry ho an'ny iPhone ity.
misintona: Tsindrio eto raha hampidina MOOD Keyboard
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Kitendry MOOD ho an'ny iPhone, mandefasa hafatra an-tsoratra
Onajano dia hoy izy:
Salama, ho an'ny iOS 9 ihany ve izy io? Satria manana iOS 8.4 (Jailbreak) aho ary kitendry no amboariko azy ary hita, fa rehefa manoratra zavatra tsy misy zava-mitranga aho dia efamira miloko marevaka 4 no miseho (izay heverina fa modely ny kianja tsirairay) ary rehefa manoratra aho dia tsy misy zavatra mitranga, satria mety ho? MISAOTRA
Mamaly an'i Onajano
Apple manapaka ny vidin'ny iPhone 6s sy 6s Plus any India
Miantso video saika ho tonga amin'ny WhatsApp